Funisisa-rectifier - ingenye amathuluzi amasha ka izinwele. Waqhubeka ukudayiswa kakhulu muva - engxenyeni yokugcina ka-2015. Kuyini sihluke ezinsimbini ezivamile futhi kungakhathaliseki ngempumelelo ikamu rectifier ngempela? Ikhasimende libuyekeza indumiso yakhe noma ukugxeka? Konke lokhu, bheka kamuva kulesi sihloko.
Funisisa-straightener ngokuvamile ifana ikamu evamile. Nokho, base elise yayo Ukushisa amapuleti bristles sakhiwa namazinyo ethize elingunxande, okuyizinto futhi izakhi Ukushisa, futhi iphethwe ofeleba zenjoloba. Ngakho, idivayisi ukuphepha esetshenziswa. On Ukushisa isici lokushisa ongama-degrees 200, kanye namathiphu zokuzivikela kuzoba degrees 50 kuphela. Ngokungafani ayina, okusebenza hhayi kuphela ngenxa yokushisa amapuleti, kodwa futhi ngenxa izinwele ionization izinhlayiya omubi icala.
Izinhlobo kagesi Ehlala Combs
Imakethe ngokushesha uvele izinguqulo ezihlukene kule lisebenze. Ake sihlolisise at izinhlobo:
Classical ikamu kagesi rectifier - ihlangabezana ngokugcwele incazelo ngenhla. Kukhona izinguqulo ezahlukahlukene ukuma ilungiselelo amazinyo, kodwa isimiso esiyisisekelo wokusebenza nsé. Ukusetshenziswa kwe-ndlela ilula: akudingeki ugijimele izinwele ikamu ke. Lona ifomu ethandwa kakhulu futhi evamile.
ibhulashi Round ukuqondisa nge umsebenzi dryer - kule divayisi ukwazi ikuvumela bawa omunye endizela ukubulala izinyoni ezintathu ngetshe elilodwa: ome izinwele zakho, qondisa them futhi wenze soft, voluminous, shiny enempilo izinwele bukhanye. Isebenza kanjani? Drum siyamanisa izinwele lapho ngidlula kubo ngokusebenzisa bristles yayo, futhi imigodi lomoya efudumele lihlasela umzimba walo, esiza izinwele ukuthatha ukuma ofiselekayo.
Funisisa-rectifier nge isilinda ujikelezisa ikuvumela ukudala zezinwele ezahlukene. Konke kuncike lapho imodi okufanele uwukhethe nokuthi ukusebenza ukunyakaza kwakhe. Kungenzeka hhayi kuphela ukuze lungise izinwele kodwa ukoma izinwele.
Yikuphi okungcono: elektrorascheska noma ayina?
Ingabe udinga kule divayisi, futhi uma ubuchwepheshe elidala unika elamukelekile? Funisisa rectifier kunezinzuzo ezifana kuqhathaniswa ezivamile yokululama ezinsimbini:
A eseyintsha ilula futhi kuphephile ukusebenzisa - nje imali okudliwa ku izinwele njengoba ibhulashi evamile.
Funisisa heats ngokushesha futhi imicu uthatha isinyathelo ngokushesha futhi, futhi musa zidonsa izinwele.
Ihlangene ukuqapha lokushisa ngenxa isibonisi encane.
Ingasetshenziselwa ngesandla esisodwa.
Utyuzhok izinwele ukonakala ngesikhathi ukulungiswa kwananoma, kuyilapho Ceramic ikamu camera kubo kuqinisa futhi inikeza umphumela antistatic.
Uma usebenzisa has a nice ikhanda massage umphumela.
Ekugcineni, kukhona umehluko okukhulu phakathi umphumela wokugcina. Funisisa rectifier akusiphuci ivolumu izinwele futhi kubanika akhanye enhle. A yensimbi izinwele eshiya izinwele kahle iqonde, ngaphandle ubukhazikhazi zemvelo.
Ingabe abathengi yangempela nekama rectifier kagesi?
Uphenyo eziphezulu nabathengisi kusuka kulesi sigaba ubuchwepheshe - Izinwele Ibhulashi straightener, ingxenye enkulu omuhle.
Lo mkhiqizo efeza imisebenzi yayo futhi isebenza kahle ku izinhlobo ezahlukene izinwele. Encwadini eside ikakhulukazi izinwele curling noma imiphumela ikamu-rectifier lingaphansi evelele kunalokho we ayina ezivamile. Hairstyle akubukeki bushelelezi kahle, futhi ukubukeka zemvelo kucocekile. Ngaphezu obukhulu namahlongandlebe izinwele ecwaninga lula kungase kunganeli futhi kuyodingeka zifezeke imicu ngokwehlukile.
Kodwa ngokuvamile, abathengi ujabulile ngaso, t. Ukuze. I ibhulashi kuthatha isikhala okuncane, kulula ukuyisebenzisa, it Mancane kakhulu amathuba kwavutha (kodwa akuyona into engenakwenzeka, kwaba nezigameko lapho abathengi uhlaziyo namazinyo ashisayo, uyakhohlwa ukuthi lokhu akukhona ibhulashi elula kagesi) .
Kodwa lokho uke wadunyazwa zabanikazi nekama rectifier? Izibuyekezo Customer aveze ukuthi amanye amadivayisi ngokweqile kushiswa ezingemuva endaweni ibhulashi. Futhi, izinkinobho ungakhululekile kakhulu, futhi kungenziwa ngezikhathi ukubaluleka lokushisa ihlelwe kabusha ngesikhathi ukusebenza nge ikamu.
Futhi kukhona ingozi ukuthenga mbumbulu. Njengazo zonke izinto ezithandwayo, amakhophi sekukhona ngokushesha okukhulu. Ngoba intengo sebezofunda 1/3 esingaphansi original, kodwa uzama ukulondoloza noma bengazi, umthengi nezingozi ethola idivayisi lapho ukushisa ayiqondakali elawulwa, umzimba wenziwe izinto ezingafanele, futhi eziyingozi kunazo zonke - kukhona awokuthi okuvela short circuit.
A imoto kuhle izinwele: libuyekeza cosmetologists. Shampoo Good for izinwele oily
Njengoba izinwele ukusika ngokwakho. Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa Clipper futhi sikelo
Comptroller: yemfanelo yomsebenzi, izici kanye nokubuyekeza
Uma ikhompyutha akaboni i wangaphandle hard drive
Amathiphu awusizo kwabavakashi abahamba ngeholidi eGibhithe
Ifilosofi ekhulwini XX. Neo - neo kuyinto ...: abameleli, incazelo kanye nezici
Kanjani ukusabalalisa i-Wi-Fi kanye notebook: Izimfihlo kubasebenzisi
Ingane wayememeza engadini: yini okufanele uyenze? Komorowski: lithathelwe ingane enkulisa. iseluleko wezengqondo
Amathe "impophoma French": ukuhlukahluka inetha isikimu